खुलेरै राजनीतिमा लागिन् मीना ढकाल, जिल्ला सदस्यमा उम्मेदवारी
गृहपृष्ठ » राजनीति » खुलेरै राजनीतिमा लागिन् मीना ढकाल, जिल्ला सदस्यमा उम्मेदवारी
बिहिबार १६ मङ्सिर, २०७८
काठमाडौं । ४ वर्ष पहिले ‘कमेडी किङ’ मनोज गजुरेलसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी मीना ढकाल खुलेरै राजनीतिमा लागेकी छिन् । तपाईंलाई जानकारी गराउ कि मीना फेसन डिजाइनर हुन् ।
उनले लामो समय बुटिक सञ्चालन गरेकी थिइन् । मीना ढकालले नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा आफूलाई जिल्ला सदस्यको उम्मेदवार बनाएकी हुन् । उनी भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार भएकी हुन् ।
सम्बन्ध बिच्छेदपछि गजुरेलले हालै दोस्रो विहे गरेका छन् । तर ढकालले भने विहे गरेकी छैनन् । उनीहरु अलग हुनुमा पनि राजनीतिको अहम भुमिका रहेको विश्वास गरिन्छ । गजुरेल कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति झुकाव राख्छन् भने मीना प्रजातान्त्रिक विचार राख्छिन् ।
मीना केही समय नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय थिइन् । पछिल्लो पटक मीनाले गत स्थानीय तहको चुनावमा गाउँमै गएर आफ्ना साथीलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा सहयोग गरेकी थिइन् । मीनाका अनुसार विवाहपछि सुरुमै पारिवारिक पृष्ठभूमि अलगअलग भएकाले गजुरेलसँग विवाद भैरहन्थ्यो ।
गाउँमै हुर्किएकी भए पनि बाल्यकालदेखि नै मीना आधुनिक थिइन् । ताप्लेजुङका गजुरेलको परिवारलाई त्यो कुरा स्वीकार गर्न सुरुमै कठिन भएको थियो । गजुरेल बाहुन र ढकाल जैसी भएका कारणसमेत परिवारमा विवाद हुने गरेको थियो ।
उदित नारायणको स्वरमा नेपाली गीत, अभिनेता आर्यन र अभिनेत्री वर्षाको अभिनय [भिडियोसहित]
साथीको विबाहमा गएका सुधिरले करिश्मालाई भगाए [ भिडियोसहित ]
क्याफेमा रोमान्स गर्दै भेटीए प्रताप र प्रियाना [ भिडियो ]
यी ५ अभिनेत्रीसँग सुन्दरताको जादु : फिल्मले १०० करोड माथी कमाए, तपाइलाई को मनपर्छ ?
पूर्व मिस युनिभर्सलाई यो ड्रेसमा कि माथि छोप्नुस् नत्र विमान चढ्ने अनुमति दिइन्न भनेपछि जे गरिन् !
नेपालको पहिलो ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल किड्स’ को उपाधि जेनिस उप्रेतीले चुमे
अभिनेता सलमान खान अदालतको शरणमा पुगे, कारण यस्तो छ
बहुचर्चित फिल्म ‘पुष्पा’को हिन्दी भर्सन युबट्युबमा आयो [ भिडियोसहित ]
स्वस्तिमाले अभिनय गरेको दक्षिण भारतीय फिल्म ‘थिरीमाली’ को ट्रेलर सार्वजनिक
काइलीले बनाइन नयाँ विश्व कीर्तिमान्
तस्विरहरूले देखाउँछ कि सन्नी लियोनी माल्दिभ्समा अद्भुत समय बिताइरहेकी छिन्
राजेशपायललाई नेपाल फर्किदा एयरपोर्टसम्मै एड्भान्स अमेरिकी सेक्युरिटी गार्डको ‘एस्कर्टिङ’
फ्याक्ट चेक : ४६ बर्षकी एकल आमा अभिनेत्री सुस्मिताले २ छोरीपछि अहिले छोरा बनाएकी हुन् ?